Mhando nyowani dzebhizinesi Startups uye vanamuzvinabhizimusi ECommerce nhau
Nhasi kune mamiriro ekuvandudza uye kugadzira. Makambani matsva uye mabhizinesi anobuda zuva rega rega. Uye kubva pane izvi, mazwi matsva akaverengerwa munhaurwa dzekugara. Mimwe yemifungo iyi inosanganisira mazwi eAnglo-Saxon senge startups Imwe pfungwa inonyanya kuzivikanwa ndeyeyemabhizimusi.
Entrepreneur ndiye munhu anotanga bhizinesi. Ichi chi zvakajairika uye zvetsika bhizinesi modhi. Parizvino izvi zvinototarisirwa sehunhu hunodiwa munzvimbo yebasa. Aya makambani anowanzo nyatso kuzivikanwa uye ane makuru mishambadziro ekushambadzira.
Zvichakadaro imwe kutanga kunotipa isu nehunyanzvi. Kutanga ndiko, muchidimbu, kambani ine hunyanzvi. Iyo inotsvaga kuiswa kweazvino matekinoroji muminda maasati ambo shandiswa. Ivo vanowanzovimba nevatsigiri kana vatengesi mukuwedzera pakukwanisa kurarama.
Kunyangwe zvinoita sekunge uri mazwi maviri anoenderana, izvi hazviwanzo kuitika. Asi kuti tinzwisise uye titsanangure chikonzero, tinofanirwa kunzwisisa kuti zvinangwa zvakasiyana zvakanyanya. Kutanga kazhinji kunowanzove netekinoroji yekushandisa zvinangwa. Pane kudaro, muzvinabhizimusi anowanzove nezvinangwa zvemari.
Naizvozvo, mune idzi kesi, yakanaka kwazvo bhizinesi chirongwa inodikanwa. Kufungidzira kwechirongwa ichi kunofanirwa kufanotarisirwa munguva pfupi. Pamusoro peiyo purofiti iri data rinodiwa. Nenzira yakasarudzika, kutanga kune vane zvibodzwa zvenguva refu. Kuitwa kwe new nzira dzekugadzira ndizvo zvakakosha. Kubatsira kuri kumashure.
Mhando mbiri dzemakambani dzinodiwa nhasi. Startups ndeaaanobvumidza nzira nyowani dzinogona kudzikamisa maitiro munzvimbo dzakasiyana Minda yakaita semushonga, machira kana kugadzira mota ndidzo dzimwe dzenzvimbo dzavanobatanidzwa.
Makambani echinyakare ndiwo anotendera pasi rose kuramba richitendeuka. Bhizinesi renyika rinogona kumira pasina kuberekwa uye kukura kwemhando dzekambani idzi. Iye zvino unoziva mutsauko. Iwe unogona kutotanga zvako!
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Nyowani mabhizimusi mamodheru Startups uye vanamuzvinabhizimusi